Ny Xiaomi Mi Max 3 Pro dia hita ao amin'ny tranokala Qualcomm | Androidsis
Andro vitsy lasa izay dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Xiaomi Mi Max 3. Io no telefaona vaovao ao anatin'ny telefaona goavambe avy amin'ny marika sinoa. Saingy, araka ny famoahana iray tonga tamin'ny ora farany, dia mety tsy io irery no fitaovana tonga amin'ity faritra ity. Satria toa misy Xiaomi Mi Max 3 Pro. Modely iray izay tsy nisy naseho.
Noho izany dia gaga be izy, raha matetika ny orinasa dia mandefa modely ao anatin'io sokajy io isan-taona. Nefa toa izany ity Xiaomi Mi Max 3 Pro ity dia mety ho tena izy ary tsy ho ela dia ho tonga eny an-tsena.
Hita tao amin'ny tranonkala Qualcomm ny telefaona. Izy io dia tao amin'ny sehatry ny telefaona izay mampiasa Snapdragon 710 ho mpikirakira azy. Tao no nahafahana nahita an'io maodely io, iray amin'ireo vitsy manatrika ao.
Mikasika ny fepetra arahana, Vitsy ny antsipiriany fantatra momba ny Xiaomi Mi Max 3 Pro. Na dia toa tsy mitovy loatra aza ny tsy fitoviana amin'ny maodely mahazatra natolotra herinandro lasa izay. Saingy tsy ananantsika hatreto ny angona rehetra momba ity fitaovana ity. Tsy maintsy miandry ny antsipiriany bebe kokoa isika ho tonga amin'ity andro ity.
Betsaka ny manontany tena ny amin'ny fisian'ity Xiaomi Mi Max 3 Pro ity. somary hafahafa ihany ny tsy misy fantatra momba ny telefaona, na koa natolotra ilay maodely hafa tamin'ny herinandro lasa teo. Ka mila miandry fanamafisana avy amin'i Xiaomi momba izany isika.
Raha tsy misy fisalasalana, raha tena izy dia mety ho fandefasana mahaliana ataon'ny marika. Ka, manantena izahay fa hanana fampahalalana bebe kokoa momba ny fisian'ity Xiaomi Mi Max 3 Pro ity amin'ny andro ho avy. Hitarina miaraka amin'ity maodely ity ve ny katalaogy finday? Mihevitra ve ianao fa misy ity fitaovana ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi Mi Max 3 Pro dia hita an-tserasera